Tuesday October 16, 2018 - 08:46:59 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya iska hor'imaadyo xooggan oo xalay ka dhacay gudaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe.
Wararka ka imaanaya Jowhar ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay xalay fiidkii weerar kedis ah ku qaadeen Koontaroolka Koonfureed ee magaalada halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan maamulka isku magacaabay Hirshabelle.
Goob joogayaal ayaa sheegay in dagaal xooggan kadib ay ciidamadii weerarka qaaday usuurtagashay in ay la wareegaan halkii lagu dagaallamay, war rasmi ah oo kasoo baxay Al Shabaab ayay ku sheegtay in hal askari ay ku dishay dagaalkii xalay.
"Mujaahidiinta ayaa xalay howlgal ay ka fuliyeen mid kamida Koontaroollada magaalada Jowhar waxay ku dileen hal askari si KMG ahna waa ula wareegeen goobtii lagu dagaallamay kadib markii maleeshiyaadkii murtadiinta isaga firxadeen" ayaa lagu yiri war lagasii daaye Idaacadda Andalus.
Daryanka rasaas xooggan oo labada dhinac is dhaafsanayeen ayaa xalay laga maqlayay inta badan xaafadaha magaalada Jowhar oo ay ku suganyihiin mas'uuliyiinta ugu sarraysa maamulka Hirshabelle iyo saraakiil caddaan ah.
Goobta xalay dagaalku ka dahcay waxay ku taal meel aan ka fogeyn Madaxtooyada Hirshabelle oo uu degganyahay Maxamed Cabdi Waare oo ku magagacaaban Madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale guriga Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo Guddoomiyaha Gobolka Sh/dhexe Ninka lagu magacaabo Axmed Meyre Makaraan.
Weerarka ayaa imaanaya xilli Xasan Cali Kheyre R/wasaaraha dowladda Federaalka Soomaaliya uu shalay booqasho hal maalin ah ku tagay magaalada Jowhar ee Sh/dhexe.